Ugu yaraan shan qof oo ku geeriyootay dagaal u dhaxeeya labbo maleeshiyo beeleed oo ka dhacay deegaanka Saax-maygaag - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandUgu yaraan shan qof oo ku geeriyootay dagaal u dhaxeeya labbo maleeshiyo beeleed oo ka dhacay deegaanka Saax-maygaag
Ugu yaraan shan qof oo ku geeriyootay dagaal u dhaxeeya labbo maleeshiyo beeleed oo ka dhacay deegaanka Saax-maygaag
January 2, 2022 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Deegaanka Saax-maygaag. [Sawir Hore]
Garoowe-(Puntland Mirror) Ugu yaraan shan qof ayaa ku geeriyootay dagaal u dhaxeeya labbo maleeshiyo beeleed oo ka dhacay deegaanka Saax-maygaag saakay oo Axad ah, sida ilo-wareedyo ay u sheegeen bog wareedka Puntland Mirror.
Dagaalkan oo ku salaysan muranka deegaamaysi deegaanka Saax-dheer iyo Sangajabiye oo u dhaxeeya gobolada Nugaal iyo Sool ayaa bilaabmay sanadkii 2021, waxaana uu dhaliyay dhimasho ilaa 18 qof labada dhinacba.
Dadaalo badan oo lagu dhex-dhexaadinayo labada dhinac iyo ciidamo lagala dhex-dhigay ayaan keenin in colaadu ay istaagto.
Madaxda Dowladdaha Xubnaha ka ah Federaalka iyo Raysulwasaare Rooble oo kulan ku yeelan doona Baydhabo
Garowe-(Puntland Mirror) talks between Khatumo administration and self-declared state of Somaliland has started in Aynaba town in Sarar region of Somaliland, official said. Khatumo’s information minister, Ahmed Haji Ali told local media that the Khatumo [...]